ESI ZOO FOTO NA INSTAGRAM - INSTAGRAM - 2019
Esi zoo foto na Instagram
Mgbe ufodu, odi nkpa iji megharia uzo egwu amr na MP3. Ka anyị lee ụzọ dị iche iche isi dozie nsogbu a.
Ntụgharị AMR ka MP3 nwere ike, nke mbụ, ndị na-emegharị ihe ntanetị. Ka anyị lebakwuo anya na mmejuputa usoro a na nke ọ bụla n'otu n'otu.
Usoro 1: Movavi Video Converter
Mbụ, tụlee nhọrọ maka ịtụgharị AMR na MP3 site na iji Movavi Video Converter.
Meghee Movavi Video Ihe Ntụgharị. Pịa "Tinye faịlụ". Họrọ site na ndepụta a gbasaa "Tinye ụda ...".
Mgbakwunye windo na-emepe mepee. Chọta ebe nke AMR mbụ. Họrọ faịlụ, pịa "Meghee".
Ị nwere ike mepee ma na-agafe windo n'elu. Iji mee nke a, dọrọ AMR si "Explorer" gaa na Movavi Video Converter Area.
A ga-agbakwụnye faịlụ ahụ na usoro ihe omume ahụ, dịka ọ na-egosi site na ngosipụta ya na interface ngwa. Ugbu a ịkwesịrị ịhọrọ usoro mmepụta. Gaa na ngalaba "Audio".
Ọzọ, pịa akara ngosi ahụ "MP3". Ndepụta nke nhọrọ dị iche iche maka ọnụego bit nke usoro a site na 28 ruo 320 kbs. Ị nwekwara ike ịhọrọ blọọgụ mbụ. Pịa na nhọrọ kachasị mma. Mgbe nke ahụ gasịrị, a ghaghị igosipụta usoro nhazi na ọnụego a họọrọ n'ọhịa "Usoro mmepụta".
Iji gbanwee ntọala nke faịlụ na-apụ apụ, ọ bụrụ na achọrọ, pịa "Dezie".
Igwe ntinye ederede meghere. Na taabụ "Trimming" Ị nwere ike ihichapụ egwu ahụ na nke onye ọrụ chọrọ.
Na taabụ "Ụda" Ị nwere ike idozi olu na ụda olu. Dị ka nhọrọ ndị ọzọ, ịnwere ike iji nhazi norm na mkpọtụ mkpọtụ site na ịlele igbe nlele n'akụkụ ọnụọgụ abụọ. Mgbe ịmechara ihe niile dị mkpa na windo nhazi, pịa "Tinye" ma "Emere".
Iji kọwaa ndekọ ndekọ nchekwa nke faịlụ na-apụ apụ, ma ọ bụrụ na afọghị afọ ojuju na nke akọwapụtara na "Chekwaa nchekwa", pịa na logo dị n'ụdị nke nchekwa na nri nke ubi aha.
Ngwa ngwa "Họrọ nchekwa". Na-agagharị gaa na ndekọ ebe na pịa "Họrọ nchekwa".
Edere ụzọ na ndekọ ahọrọ na mpaghara ahụ "Chekwaa nchekwa". Malite ntụgharị site na ịpị "Malite".
Usoro ntụgharị a ga-arụ. Mgbe ahụ, ọ ga-amalite na akpaghị aka. "Explorer" na nchekwa nke echekwara MP3 ọpụpụ.
Ekwesiri ighota na ufodu ihe nadighi nma nke uzo a bu ihe nadigh nma bu Movavi Video Converter. Enwere ike iji usoro mbipute mee ihe maka ụbọchị 7, ma ọ na-enye gị ohere iji tọghata naanị ọkara nke faịlụ AMR mbụ.
Usoro 2: Hazie Ụlọ ọrụ
Ihe omume ọzọ nwere ike ịmegharị AMR ka MP3 bụ Onye nrụpụta ntọala.
Mee ka Ụlọ ọrụ mmepụta ihe rụọ ọrụ. Na windo nke ukwu, gaa na ngalaba "Audio".
Site na ndepụta nke usoro ọdịyo na-ahọrọ akara ngosi ahụ "MP3".
Mwube ntọala maka ịtụgharị na MP3 ga-emepe. Ịkwesịrị ịhọrọ isi iyi ahụ. Pịa "Tinye Njikwa".
Na shea meghere, chọta ndekọ ebe AMR dị. Mgbe akara akara faịlụ, pịa "Meghee".
Aha faịlụ AMR na ụzọ ya ga-apụta na windo ntọala nke etiti maka ịtụgharị na MP3. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye ọrụ ahụ nwere ike ime ntọala ndị ọzọ. Iji mee nke a, pịa "Hazie".
A ga-arụ ọrụ "Ntụnye ụda". N'ebe a ị nwere ike ịhọrọ otu nhọrọ nhọrọ:
N'ikwe ka ogo ahụ dị elu, nnukwu faịlụ ọdịyo ahụ ga-ewepụ ya, na ogologo oge usoro ntọghata a ga-arụ.
Na mgbakwunye, n'otu window ahụ, ị ​​nwere ike ịgbanwe ntọala ndị a:
Mgbe ị gbanwee, pịa "OK".
Dịka ntọala ndabara, a na-eziga faịlụ ọdịyo nke na-apụ apụ n'otu ndekọ ahụ ebe isi iyi dị. Enwere ike ịhụ adreesị ya n'ógbè ahụ "Njedebe Ikpeazụ". Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-ezube ịgbanwe ndekọ a, ọ ga-ehichapụ "Gbanwee".
Ngwaọrụ agbụ "Chọgharịa nchekwa". Dee ebe ederede chọrọ ma pịa "OK".
Adreesị nke ntinye ohuru nke faịlụ a na-apụ apụ ga-apụta na "Njedebe Ikpeazụ". Pịa "OK".
Anyị na-alaghachi na windo nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Enweelarịrị aha ọrụ nke ịmegharị AMR na MP3 na njigide ndị ọkachamara kwuru na nzọụkwụ ndị gara aga. Iji malite usoro, gosi ọrụ na pịa "Malite".
A na-eme usoro nke ịmalite AMR ka MP3, ọganihu na-egosi nke ọma na pasent.
Mgbe njedebe nke usoro ahụ na kọlụm "Ọnọdụ" ọnọdụ a kapịrị ọnụ "Emere".
Iji gaa nchekwa nchekwa nchekwa MP3, gosi aha aha ma pịa "Njedebe Ikpeazụ".
Ohere "Explorer" na-emepe na ndekọ ebe ebe MP3 dịgharịrị dị.
Usoro a dị mma karịa nke gara aga na-arụzu ọrụ ahụ na iji usoro mmepụta ihe bụ n'efu na ọ dịghị achọ ịkwụ ụgwọ.
Usoro 3: Ọ bụla Video Ihe Ntụgharị
Onye ọzọ na-agbanwe agbanwe nke nwere ike tọghata na ntụziaka nyere bụ Ihe ọ bụla Video Ihe Ntụgharị.
Mee Video Ihe Ntụgharị. Ịbụ na taabụ "Ntụgharị"pịa "Tinye Video" ma "Tinye ma ọ bụ dọrọ faịlụ".
Ihe tinye tinye amalite. Chọta ebe nchekwa nchekwa. Dee ya ma pịa "Meghee".
Ọrụ nke ịgbakwunye faịlụ faịlụ nwere ike ijikwa na-enweghị mepee windo ọzọ; iji mee nke a, wepụ ya na "Explorer" n'ime ókè nke ọ bụla Video Ihe Ntụgharị.
Aha nke faịlụ ọdịyo ga-apụta na windo etiti nke Onye Video Converter. Ị ga-ekenye usoro ọpụpụ. Pịa n'ubi gaa n'aka ekpe nke mmewere. "Tọghata!".
Ndepụta nke usoro ga-emepe. Gaa na ngalaba "Faịlụ faịlụ"nke edere na listi dị n'aka ekpe site n'ụdị akara ngosi n'ụdị ihe edeturu. Na ndepụta nke mepee, pịa "MP3 Audio".
Ugbu a na mpaghara "Ntọala Ntọala" Ị nwere ike ịkọwa ntọala ntọala ntọala. Iji kọwaa ndekọ maka faịlụ na-apụ apụ, pịa akara nchekwa ahụ gaa n'aka nri nke ubi ahụ "Ntuziaka mmepụta".
Malite "Chọgharịa nchekwa". Họrọ ndekọ nke achọrọ na shea nke ngwá ọrụ a wee pịa "OK".
Ugbu a ụzọ na-aga ebe ntanetị egwu na-egosi na "Ntuziaka mmepụta". Na otu nke parameters "Ntọala Ntọala" I nwekwara ike ịtọ mma olu:
N'ebe a, ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike ịkọwa oge mmalite na njedebe nke mpempe akwụkwọ a gbanwere, ma ọ bụrụ na ị ga-agbanwe ọ bụghị faịlụ niile.
Ọ bụrụ na ị pịrị aha aha ahụ "Ntọala Ntọala", mgbe ahụ, a ga-enye ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ maka mgbanwe ndị a:
Ntaneti di iche iche (site na 1 ruo 2);
Ọnụ ego (site na 32 ruo 320);
Ọnụ ọgụgụ nlele (site na 11025 ruo 48000).
Ugbu a ị nwere ike ịmalite ịgbanwe. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ahụ "Tọghata!".
Ngbanwe na ọganihu. A na-egosipụta ọganihu site na iji akara, nke na-enye data na pasent percent.
Mgbe usoro ahụ gasịchara, ọ ga-amalite na akpaghị aka. "Explorer" na ebe ịchọta ọpụpụ MP3.
Usoro 4: Nchịkọta ihe omimi
Onye ọzọ na-agbanwe agbanwe nke na-edozi nsogbu a bụ usoro pụrụ iche maka ịtụgharị faịlụ ọdịyo Total Audio Converter.
Gbaa Ntaneti Ntaneti zuru ezu. Iji onye njikwa faịlụ ahụ wuru, họta nchekwa na akụkụ aka ekpe nke window nke nwere AMR isi. Na akụkụ aka nri nke usoro ihe omume ahụ, a ga-egosipụta faịlụ niile nke ndekọ a, nke ọrụ a na-akwado site na Total Audio Converter. Họrọ ihe gbanwere. Wee pịa bọtịnụ ahụ. "MP3".
Ọ bụrụ na ị na-eji mbipụta ikpe nke usoro ihe omume ahụ, obere windo ga-amalite, nke ị ga-echere 5 sekọnd ruo mgbe oge ga-agwụ ngụgụ. Wee pịa "Nọgidenụ n'ihu". Na nsụgharị ụgwọ, nzọụkwụ a na-agba ọsọ.
A na-emepe windo ntọala ntọala. Gaa na ngalaba "Ebee". N'ebe a, ị ga-ezipụta ebe kpọmkwem faịlụ a na-ege ntị ga-aga. Dịka ntọala ndabara, ọ bụ otu ndekọ ahụ ebe echekwara isi iyi ahụ. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-ezube ịkọ ndekọ ọzọ, wee pịa bọtịnụ ahụ na ellipsis na nri nke mpaghara ahụ "Filename".
Ngwaọrụ amalite. "Zọpụta Dị ka ...". Gaa ebe ị ga-etinye mgbanaka MP3. Pịa "Chekwa".
Adreesị ahọrọ ga-apụta na mpaghara ahụ "Filename".
Na ngalaba "Akụkụ" Ị nwere ike ezipụta mmalite na njedebe oge nke akụkụ nke ịchọrọ ịtọghata, ma ọ bụrụ na ị bu n'obi ịtụgharị ihe niile. Mana atụmatụ a dị naanị na nsụgharị ụgwọ nke usoro ihe omume ahụ.
Na ngalaba "Mpịakọta" Site na ịmegharị ihe mmịfe ahụ, ị ​​nwere ike ịkọwa nguzo olu.
Na ngalaba "Oge" Site na ịgbanwuo bọtịnụ redio, ị nwere ike ịtọ ugboro ugboro nke ntanghachi ihe dị na 800 ruo 48,000 Hz.
Na ngalaba "Ọwa" Site na ịgbanwee bọtịnụ redio, otu n'ime ọwa atọ ahọrọla:
Na ngalaba "Gaa" Site na ndetu ndepụta, ị nwere ike ịhọrọ bitrate si 32 ruo 320 kbps.
Mgbe ntọala niile kwuru, ị nwere ike ịmalite ntụgharị. Iji mee nke a, na nkwụnye aka ekpe, pịa "Amalite ntọghata".
A windo meghere ebe ị nwere ike ịhụ nchịkọta ntọala ntọghata dabere na data mbụ nke onye ọrụ ma ọ bụ data ndabara, ma ọ bụrụ na ha agbanwebeghị. Ọ bụrụ na ị kwenyere na ihe niile, wee malite usoro, pịa "Malite".
A na-eme usoro nke ịtụgharị AMR na MP3. A na-egosipụta ọganihu ya site na iji akara dị oke na pasent.
Na njedebe nke usoro na "Explorer" Ihe nchekwa nke faịlụ ọdịyo MP3 a kwadebere na-emeghe.
Mmetụta nke usoro a bụ na mbipute free nke usoro ihe a na-enye gị ohere ịgbanwere naanị 2/3 nke faịlụ ahụ.
Usoro 5: Ngbanwe
Ihe omume ọzọ nwere ike ịmegharị AMR ka ọ bụ MP3 bụ onye mgbagwoju anya nke nwere interface dị mfe - Tọghata.
Run Convertilla. Pịa "Meghee".
I nwekwara ike iji menu site na ịpị "Njikwa" ma "Meghee".
Window oghere ga-amalite. Jide n'aka na ịhọrọ ihe dị na ndepụta nke usoro a gosipụtara. "Faịlụ niile"ma ọ bụghị ihe a agaghị egosipụta. Chọta ndekọ ebe a na-echekwa faịlụ egwu AMR. Họrọ ihe, pịa "Meghee".
Enwere nhọrọ ọzọ iji gbakwunye. Ọ na-agafe na windo oghere. Iji mezuo ya, dọrọ faịlụ ahụ "Explorer" gaa ebe ebe ederede di "Mepee ma ọ bụ dọrọ faịlụ vidio ebe a" na Convertilla.
Mgbe ị na-eji nke ọ bụla n'ime nhọrọ mmeghe, ụzọ na faịlụ ahụ a na-ederede ga-apụta na "Njikwa iji tọghata". Dịrị na ngalaba "Hazie", pịa na ndepụta nke otu aha. Na ndepụta nke usoro, họrọ "MP3".
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-ezube ịgbanwe àgwà nke ọpụpụ MP3, mgbe ahụ na mpaghara ahụ "Mma" kwesịrị ịgbanwe uru ya na "Mbụ" na "Ndị ọzọ". Ihe mmiri ga-egosi. Site na ịdọrọ ya aka ekpe ma ọ bụ aka nri, ị nwere ike belata ma ọ bụ welie ogo nke faịlụ ọdịyo, nke na-eduga na mbenata ma ọ bụ abawanye na nha ya dum.
Site na ndabara, faịlụ ikpeazụ ga-aga n'otu nchekwa ahụ dị ka isi iyi. Adreesị ya ga-apụta n'ọhịa "Njikwa". Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ na-ezube ịgbanwe ebe nchekwa ebe, pịa akara ahụ n'ụdị ndekọ na akụ na aka ekpe.
Na windo ulo oru, gaa na ntughari achọrọ wee pịa "Meghee".
Ugbu a ụzọ na ubi "Njikwa" ga-agbanwe na nke onye ọrụ ahụ họọrọ. Ị nwere ike ịme mgbanwe. Pịa bọtịnụ ahụ "Tọghata".
A na-eme mgbanwe. Mgbe ọ gwụsịrị, ọnọdụ ga-apụta na ala nke okwute Convertilla. "Nchigharị zuru ezu". Olu faịlụ ga-abụ na nchekwa ahụ onye ọrụ ahụ kwuru na mbụ. Iji gaa na ya, pịa akara ahụ n'ụdị nke katalọgụ gaa n'aka nri nke mpaghara ahụ. "Njikwa".
"Explorer" Mepee na folda ebe echekwara faịlụ egwu egwu.
Mmetụta nke usoro a bụ na ọ na-enye gị ohere iji tọghata naanị otu faịlụ na otu ọrụ, ọ nweghịkwa ike igosipụta mgbanwe nke otu, dịka omume mmemme ndị a kọwara n'oge gara aga nwere ike ime. Tụkwasị na nke ahụ, Convertilla nwere ntinye ntanetị ihe ntanetị ole na ole.
E nwere nnọọ ndị na-agbanwegharị nke nwere ike ịmegharị AMR na MP3. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị ntụgharị nke otu faịlụ nwere ọnụọgụ kachasị nke ntọala ndị ọzọ, mgbe ahụ na nke a, usoro ntọghata Convertilla dị mma maka gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmegharị oke ma ọ bụ dezie faịlụ ọdịyo dị na nha kpọmkwem, ọnụego bit, ụda olu ma ọ bụ ntọala ndị ọzọ, wee jiri ndị ọzọ dị ike karị - Movavi Video Converter, Format Factory, Any Video Converter or Total Audio Converter.